७८ सालमा देशलाई झन् ठुलो बिपत्ति आउने भन्दै ज्योतिषले गरे डर लाग्दो भविष्यवाणी ! के हुदैछ ? हेर्नुहोस – Complete Nepali News Portal
७८ सालमा देशलाई झन् ठुलो बिपत्ति आउने भन्दै ज्योतिषले गरे डर लाग्दो भविष्यवाणी ! के हुदैछ ? हेर्नुहोस
Kamal Sargam October 16, 2020
काठमाडौँ, देशमा सिमाना तथा कोरोनाको सहि भबिस्यबाणी गरेर चर्चामा आएका युवा ज्योतिषि शिब राज रेग्मी ले २०७७ साल भन्दा २०७८ साल देशलाइ झन ठुलो बिपत्ती आइपर्ने भबिस्यबाणी गरेका छ्न । त्यस्तै २०७७ सालको मङसिर १ गते भित्र देशको राजनितिमा ठुलो उथलपुथल आउछ भन्दै ठुलै नेताहरु जेल पर्ने पनि उहाँले भबिस्यबाणी गरेका छ्न ।